Etu aga - esi hazie ozi ịntanetị gị iji nweta azịza ndị ka mma | Martech Zone
Onye ahia ọ bụla maara na ndị na-azụ ahịa taa chọrọ ahụmịhe nke onwe; na ha enwekwughi afọ ojuju naanị ịbụ ọnụọgụgụ ọzọ n'etiti ọtụtụ puku akwụkwọ ndekọ akwụkwọ. N'ezie, ụlọ ọrụ nyocha nke McKinsey na-eme atụmatụ na ịmepụta a ahaziri ịzụ ahịa nkeonwe nwere ike ịkwalite ego site na 30%. Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa nwere ike ịgbalịsi ike ịhazi nkwukọrịta ha na ndị ahịa ha, ọtụtụ na-anabataghị otu ụzọ ahụ maka atụmanya izi ozi email ha.
Ọ bụrụ na ndị ahịa na-achọ ịhazi onwe ha, enwere ike iche n'echiche na ndị na-eme ihe ike, ndị na-ede blọgụ, na ndị nwe weebụsaịtị ga-achọ ahụmịhe yiri ya. Nhazi nke onwe ya dika ihe di mfe iji melite onu ogugu, nri? Chọpụta. Mana nhazi onwe nke ozi email dị iche na ịhazi onwe ya n'ahịa ndị ahịa, ọ bụ ya mere na ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ike ọ gaghị ahụ ihe ịga nke ọma doro anya.
N'ahịa ire ahịa, ndị ahịa nwere ike ikewapụ kọntaktị ha ma mepụta obere nhọrọ nke ozi ịntanetị iji rịọ ndị niile natara n'ime otu ahụ. Na mgbasa ozi mgbasa ozi, agbanyeghị, nkewa otu ezughi ezu. Ọkpụkpụ dị mkpa ka ọ bụrụ onye ahaziri iche na ọkwa onye ọ bụla iji nwee mmetụta dị mma na nke kachasị mma na nke a, n'ezie, pụtara na ọ dị mkpa maka nyocha dị elu.
Mkpa Nchọpụta Dị Mkpa
Ọ nwere ike ịbụ ezigbo ịma aka - ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume - ịhazi ọfụma nke ọma n'amaghị ihe nyocha miri emi. Nnyocha dị mkpa, ọkachasị n'oge Onye isi Google mbụ nke Spam Matt Cutts na-atụle ịde blọgụ ndị ọbịa 'na-abawanye omume spammy'. Ndị na-ede blọgụ na-achọkwu; n'ihi na ndị na-etinye n'ezie mgbalị n'ime ka echiche ha nụrụ.
Agbanyeghị, 'nyocha', na ihe atụ a, abụghị naanị ịmara aha mmadụ ma nwee ike icheta aha nke blọgụ na nso nso a; ọ bụ banyere ịbanye n'ime omume nnabata gị na onye nnata gị, mmasị ha, na ihe masịrị ha iji tinye aka… na-enweghị ka ha dị ka ịntanetị stalker, n'ezie!
Wzọ 4 iji hazie ozi ịntanetị gị na nyocha
N'ihe banyere ikwusa ozi ọma na ime ka echiche mbụ sie ike ma baa uru, ọ dị mkpa ka ndị ahịa ghara ịdaba n'ọnyà nke ime ka ndị mmadụ mara email emehie emehie. Ogwe nke ahaziri iche nwere ike isi ike ịnweta, mana ndụmọdụ 4 a maka ịhazi ozi ịntanetị nwere ike melite ohere ịga nke ọma:
Hazie Usoro Isiokwu Gị - Ebe izizi ga - ebido bụ eriri ahịrị email gị. Nnyocha na-egosi na usoro isiokwu ahaziri iche nwere ike mụbaa emeghe ọnụego site na 50%, mana kedu ụzọ kachasị mma iji tinye mmetụ nke ahaziri aha na isi gị? Na nke a, ọ bụ ihe gbasara emotive nke onwe karịa ịhazi ahazi. Naanị ịtinye aha nnata gị na ahịrị isiokwu gị agaghị ebipụ ya. N'ezie, nke a nwere ike bụrụ omume na-emebi emebi ebe ọ bụ na ọ ghọrọ ngwa ngwa ụzọ aghụghọ ndị ụlọ ọrụ na-ezipụ ozi ịntanetị na-achọghị. Kama, gbalịa ilekwasị anya na ihe na-emetụ ihe; mmasị ezubere iche. Gburugburu echiche ọdịnaya iji nweta niche onye nnata, ma cheta: nke akpa okwu abụọ nke usoro isiokwu ọ bụla kachasị mkpa! Isi ihe onyonyo: Neil Patel
Chọpụta ohere ndị ọzọ maka ịhazi mmadụ - Isi okwu a abụghị naanị ebe ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye mmetụ nke ịhazi na ọkwa. Chee echiche ma ọ bụrụ na enwere ohere ọ bụla iji hazie ụda olu gị ka gị na onye nnabata were soro. Ugbu a bụ oge iji rapara na nyocha ahụ. Dịka ọmụmaatụ, enweghị nhọrọ zuru ụwa ọnụ na ụdị ọdịnaya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ahọrọ ịhụ isiokwu, ndị ọzọ na-ahọrọ infographics na visualizations data ndị ọzọ, ụfọdụ na-ahọrọ onyonyo na vidiyo, ndị ọzọ na-ahọrọ usoro mgbasa ozi ọzọ. Kedu ihe nnata na-amasị? N'ezie, njikọ ọ bụla etinyere na pitch na ọrụ gị kwesịrị ịdị mkpa maka mmasị onye nnata, ma gbalịa itinye ụfọdụ n'ime okwu ha na ụda olu ha na ọdịnaya gị. Isi ihe onyonyo: Onye omekome
Gaa sama na gafee - Mgbe ụfọdụ, ndụmọdụ 1 na 2 naanị anaghị ezu iji nye atụmanya ịbịaru ọhụụ na ahụmịhe nke ahaziri iche. Ọ nwere ike ịdị mkpa ịgafe karịa iji wee pụta nke ọma. Tụlee ịdebanye aka na blọọgụ dị mkpa na blọọgụ nke onye nnata zoro aka n'oge gara aga, ma ọ bụ ọbụna na-ezo aka na blọgụ nke ha na mbọ iji jikọta echiche ha na echiche gị. Ikekwe ọbụna na-atụ aro maka isi mmalite ndị ọzọ na ha nwere ike inwe mmasị dabere na omume na omume ha n'ịntanetị. Ọ bụrụ na onye nnata na-eji ọtụtụ visuals iji nweta isi ihe ha, gosipụta nke a na olulu ahụ. Iji nseta ihuenyo dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịmanye onye nnata ka ọ payaa ntị nke ọma.
Jiri Ngwaọrụ Ndị Dịnụ - Enweghị agọnarị nnabata nke onwe maka onye ọ bụla na - anabata ya - n’adịghị ka nhazi nke aha ndị ahịa edepụtara - na - agbasi mbọ ike nke ọtụtụ ndị na - ere ahịa anaghị enwe oge. Nke a apụtaghị na enweghị ike ịhazi ọkwa email. N'ezie, ozi ịntanetị nwere ike ịhazi onwe gị site na iji ngwa ahịa na-achịkwa ọtụtụ akụkụ nke usoro ahụ. Ngwaọrụ ndị a nwere ike inyere aka ịmata ọdịmma blogger site na nyocha ọdịnaya, yana soro ma nkwukọrịta na mbata iji mee ka ndị na-ere ahịa jiri ọsọ ọsọ na ngwa ngwa laghachi mkparịta ụka gara aga. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ dị mkpa iji ngwaọrụ ndị a dị iji hụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga n'ihu na-aga nke ọma.
Chọta Ntọala Kwesịrị Ekwesị
Ihe ngosi aka ikpeazụ dị n’elu, ọ bụ ezie na ọ bara uru, na-emeghe nnuku ikpuru. Nhazi onwe onye bu ihe puru iche na ihe ndi mmadu, na imeputa mmekorita nke mmadu na mmadu enweghi ike ime nke oma site na ngwa oru. Chọta nguzozi ziri ezi n’etiti ntinye akwụkwọ ntuziaka na akụrụngwa mgbakwunye bụ isi ihe na -emepụta ọkpụkpọ ahaziri iche nke na-akpali, itinye aka na ya.
Tags: emailỌdịnaya Emailnzisa ozi emailemail nkeonweozi emailije ozigboozi emailpr izi ozipr ọkwammekọrịta ọha na ezemmekọrịta ọha na eze